इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता नहुने अमेरिकाको घोषणा ! - Nepal Insider
January 7, 2020 474
इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदैछन् भन्ने कुरालाई अमेरिकी रक्षामन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभएको छ । एक अमेरिकी सैन्य जनरल इराकबाट सेना फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव दिँदै लेखेको पत्रपश्चात् पेन्टागनका प्रमुख मार्क एस्परले अहिले फौज फिर्ता गर्ने बेला नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
अमेरिकी सैन्य जनरलले लेखेको पत्रमा अमेरिकाले आगामी दिनहरुमा फौजलाई स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ । इराकी संसदले इराकबाट अमेरिकी फौज फिर्ता हुनुपर्ने भनी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि उक्त पत्र लेखिएको थियो ।अमेरिकी रक्षामन्त्रीले उक्त पत्र अहिले अमेरिकाले राखिरहेको अडानसँग नमिल्ने बताउनु भएको छ ।
इराकमा इरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीको ह त्यापश्चात् अमेरिकी सेनामाथि बढेको खतराबीच यस्तो अन्यौल सिर्जना भएको छ । इराकी प्रधानमन्त्रीले आफू पनि अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इराकबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपरेमा इराकमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाउने बताउनु भएको छ ।
गत शुक्रबार अमेरिकी सेनाको विशेष प्रकृतिको कारबाहीका क्रममा इरानी फौजको विशेष दस्ता क्विडका प्रमुख कमाण्डर कासिम सुलेमानी मा रिएका थिए ।
मा रिएका ती सुलेमानीलाई अमेरिकाले विगतदेखि नै ‘आ’तङ्क’का’री’ समूहको नाइके भएको बताउँदै आएको थियो । यो आ’क्र’मण अमेरिकाको तयारीमा नै भएको बताइएको छ । जुन कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले नै पुष्टि गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै उनको ह’त्याको निर्देशन दिएका बताइएको छ । आ’क्रमणका लागि उहाँको निर्देशन रहेको अमेरिकाले नै बताएको छ । यता इरानका सर्वाेच्च नेताले अमेरिकी आ’क्रमणमा आफ्नो सेनाको जनरल मा’रिएपछि यसको क’डा ब’दला लिने चेतावनी दिनुभएको छ ।
इरानी सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । शुक्रवार इराकको बग्दादमा इरानी फौजको विशेष दस्ता क्विडका प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मा’रिएपछि उहाँले अमेरिकाविरुद्धमा कडा रूपमा बदला लिने बताउनुभएको हो ।
इरानले देशभरी नै तीन दिनसम्मका लागि राष्ट्रिय शो’कको पनि घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै इरानी रक्षामन्त्री जावेद जारिफले शुक्रबार अमेरिकी सेनाले गराएको यो घटनालाई अन्तरराष्ट्रिय आ’तङ्क’वाद भनी आरोप लगाउनुभएको छ ।
शुक्रबार भएको यस सैन्य कारबाहीपछि उ’त्तेजकरूपमा व्यवहार नगर्न र संयमता अपनाउन विभिन्न देशले आग्रह गरिरहेका छन् । यस कारबाहीको चीन, रुस र सिरियाले यस हवाई आ’क्रमणको आलोचना गरेका छन् तर युरोपेली सङ्घले भने थप हिं’सा भ”ड्कि’न नदिन सबै पक्षलाई सं’वेदन’शील भएर संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
Prevइन्डोनेसियामा गयो ठुलो भूकम्प, मान्छेको भा’गदौड मच्चियो घरहरु भत्किए !
Nextअविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध, १ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना !
कोरोना भाइरसको संक्रमणले च’पेटामा परेको चीनको जनजीवन सामान्य बन्दै
स्वास्थ्यकर्मी भ’ड्काउँदै सरकार, यसरी च्या’त्तिएका ‘पिपिई’ लगाई ज्यानको बा’जी लगाएर सेवा गरिरहेकालाई, प्रोत्साहनको सट्टा लाइसेन्स खारेज गर्ने ध’म्की !